सूर्य लाईफद्वारा ग्लोबल आईएमई र ओम डेभलपमेन्टसँग सम्झौता – Beema News
सूर्य लाईफद्वारा ग्लोबल आईएमई र ओम डेभलपमेन्टसँग सम्झौता
प्रकाशित मिति: १२ जेष्ठ २०७६, आईतवार ११:४५
काठमाडौं । बीमा कम्पनीले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुसँग सम्झौता गरी बैंकान्स्योरेन्स सम्झौता गरी कारोबारको दायरा फराकिलो बनाउने क्रम जारी छ । यसैक्रममा सूर्य लाईफ इस्न्योरेन्स कम्पनीले दई बैंक तथा वित्तिय संस्थासँग सम्झौता गरेको छ ।
ब बर्गको वित्तिय संस्था ग्लोबल आइएमई बैंक लि. र सूर्यलाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीलि.बीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता भएको छ । सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षरपछि ग्लोबल आईएमई बैंक लि. का १३७ वटै शाखाहरु मार्फत सूर्य लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिको जीवन बीमा योजनाहरु खरिद गर्नुका साथै जीवनबीमा सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरु प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
उक्त सम्झौता पत्रमा ग्लोबल आईएमई बैंकको तर्फबाट कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश शर्मा ढकाल र सूर्यलाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लि.को तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवनाथ पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
त्यस्तै ओम डेभलपमेन्ट बैंकसँग पनि सुर्य लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले सम्झौता गरेको छ । सम्झौता अनुसार ओम डेभलपमेन्ट बैंकमार्फत समेत सूर्य लाईफको बीमा कारोबार गर्न सकिनेछ ।